Vohitra any Ségou: Mivavaka Hiavian’ny Orana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2011 7:49 GMT
Tamin-karavoana no nankalazàn'ireo vohitra tao Ségou ny fiafaràn'ny Ramadany. Fankalazàna roa sosona izy io, satria taorian'ny iray volana manindritra nanaovam-bavaka sy niandràsana, dia avy ny orana tany amin'ity faritra iray ao Mali ity. Na dia somary tara ihany aza, dia zavatra niriana ho hitan'ny maso izany fiavian'ny orana izany. Ny fotoan'ny orana, ny ririnana, na “hivernage,” raha ny fahafantarana azy amin'ny teny frantsay, dia manondro indrindra io fotoana io izay hamafàzan'ny mpamboly ny masomboliny alohan'ny hiasàn-dry zareo ny tany. Rehefa tsy misy rano amin'ny fatra sahaza, ny mahazatra dia avy amin'ny ranon'orana, dia tena atahorana ny hisian'ny fiantraikany amin'ny vokatra. Io no lohahevitra noresahan'ireo bilaogera vaovao avy amin'ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices Ségou Villages Connection.
Oumar Dembéle (@D1Oumar) avy ao Cinzana Gare, izay nasongadina tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny iray amin'ireo bilaogera nasongadina, dia mibitsika hoe [fr]:
Maneho ny ahiahiny ihany koa izy mikasika ity tonon-taona ity ao amin'ity bitsika ity [fr]:
Lazain-dry zareo fa tsy fambàra tsara ny habetsahan'ny lianas aty ampiandohan'ny fotoanan'ny orana. Araka ny lovan-tsofiny dia mety hitarika fiantonan'ny orany izany.
Ary dia toa voamarina izay noeritreretina ho finoanoam-poana, ary voaporofo ny tahotr'i Oumar. Fa koa, Boukary Konaté (@fasokan), mpandrindra ilay tetikasa, dia nampakatra andianà bitsika mikasika io olana io [fr]:
Ampian'i Boukary hoe ireo mpamboly dia tsy afaka namàfy teo amin'ny tanin-dry zareo [fr] noho ny tsy fahampian'ny orana ka mahatonga ny tany ho makiana tokoa [fr]. Manazava ny toe-draharaha misy izy ao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogy Segou Infos [fr]:
Ary andro vitsy taorian'io dia nanomboka nanorana matetitetika [fr]. Yaya Coulibaly (@ycoulibaly) izay nasongadina ihany koa tao anaty tafatafa fanasongadinana bilaogeran'ny Rising Voices dia safononoky ny hafaliana raha nahita izy tamin'ny 20 Aogositra hoe:
Ho famintinana, Modobo Traoré, tantsaha iray ao Bamoussobougou any Cinzana-Gare, dia mandefa fitanisàna ny rotsak'orana nandritra ny volana Aogositra, izay nampakarina tao amin'ny Bilaogy Ségou Infos [fr]: